CSS3 Corners, Gradients, Shadows ary maro hafa ... | Martech Zone
Takela-by miendrika cascading (CSS) dia teknolojia tsy mampino, mamela anao hanasaraka mora foana ny atiny amin'ny famolavolana. Mbola miara-miasa amin'ireo orinasa manana tranokala sy interface interface tsara izahay, manery azy ireo hiantehitra amin'ny mpamorona hanamboatra izay fanitsiana rehetra. Raha eo ny orinasanao dia mila mikiakiaka amin'ny ekipan'ny fampandrosoana ianao (na mahazo vaovao). Ny famoahana voalohany ny CSS dia 14 taona lasa izay! Eo amin'ny fanintelony fahatelo amin'ny CSS3.
Ny CSS3 dia noraisina ary tohanana ao amin'ireo kinova fanaovan-tserasera farany malaza, ary tonga ny fotoana hanararaotana! Raha tsy tsapanao izay azo atao amin'ny CSS3, oneextrapixel dia nametraka Infographic mahafinaritra amin'ny endri-javatra manan-danja ampiasain'ny CSS3 - ao anatin'izany ny fametrahana radius sisin-tany (zorony boribory), opacity (ny fahaizana mahita amin'ny alàlan'ny singa iray), sary sisin-tany, sary marobe, gradients, tetezamita loko, aloky ny singa ary aloky ny endritsoratra. Misy vokany sasany tsy mampino azonao atao amin'ny fitambaran'ny HTML5 sy CSS3.
Nahoana no zava-dehibe ny CSS3? Amin'izao fotoana izao, ny mpamorona dia mampiasa fitambarana sary, HTML ary CSS hanamboarana ireo pejin-tranonkala izay mahafinaritra amin'ny endriny. Raha vantany vao tohanana ireo singa sary rehetra dia mety ho azo atao ihany ny manafoana ny Illustrator na Photoshop ary asaivo jeren'ny browser ny sary sy ny sosona araka ny itiavantsika azy ireo. Mety mbola am-polotaona izao no lasa - saingy arakaraka ny ahatongavantsika dia tsara kokoa ireo tranonkala azontsika atao ary mora kokoa ny mamolavola azy ireo amin'ny sidina.